Aimbove Mukuru weMapurisa Okandwa Mujeri kweMakore Gumi neSere
Mumwe wevaimbove mukuru wemapurisa ari Chief Superintendent, Joseph Chani, atongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemasere, zvichitevera kuwanikwa aine mhosva yekuponda munhu.
Vachipa mutongo wavo mudare range rakazara nevanhu kwaMutare, mutongi wedare repamusoro, Amai Hlekani Mwayera, vati dare ravo rawana Chani aine mhosva yekuponda VaTsorosai Kusena, avo vakanga vasungwa nemapurisa kuminda yemangoda kwaChiadzwa musi wa 23 Gunyanya gore rapera.
Amai Mwayera vati vawana zvakare Chani aine mhosva yekurova hama dzemufi dzinoti Wonesai naPikirayi Kusena, pamwe naJohn Gwite.
Amai Mwayera vati Chani achaendera kujeri nyaya iyi kwemakore matatu. Asi vati mutongo wechipiri uyu uchapikwa munguva imwe cheteyo apo anenge achipika mujeri kwemakore gumi nemasere.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda neKimberley Process, VaShamiso Mtisi vati kutongwa nekubatwa nemhosva yekuponda kwemumwe aive mukuru wemapurisa kuManicaland uyu, kunoratidza kuti matare edzimhosva emunyika ave kuita basa nemazvo.
Mashoko aVaMtisi aya atsinhirwawo nasachigaro weResources Exploitation Watch, VaTafadzwa Musarara, avo vawedzerawo kuti danho iri rinochenura Zimbabwe iyo yanga ichipomerwa mhosva yekutsikirira nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzevanhu kwaMarange.
Asi vamwewo vari kubvunza kuti chiitiko ichi chingaratidza here kuti vakuru-vakuru muchipurisa, muhurumende pamwe nemuchiuto, vakapara mhosva dzekuponda vave kuzosvikirwawo neruoko rwemutemo, kana kuti Chani angoitawo gonzo mhini rabuda mumwena chemudzimu chikariwanira panze.
Hurukuro naVaShamiso Mtisi pamwe naVaTafadzwa Musarara